XIKOO waxay leeyihiin dhamaan badeecadayada qaboojiyaha hawlahooda si madaxbanaan loogu talagalay loona horumariyey xuquuq madaxbanaan oo aqooneed. Waxaan ku siin karnaa adeegyada wax soo saarka OEM iyadoo loo eegayo macaamiisha dalabaadka dalal iyo gobollo kala duwan, OEM sida: midabka muuqaalka wax soo saarka, wax soo saarka shaqooyinka qayb ahaan, danab, soo noqnoqoshada, baakadka, Baakadaha wax soo saarka iyo shuruudaha kale ee macaamiisha, kooxdayadu waxay ku siin doontaa adeegyo OEM si daacad ah .
XIKOO wuxuu iskaashi la yeelan karaa nooc weyn oo loogu talagalay naqshadeynta caaryada, horumarka, cirbadeynta cirbadeynta caarada, iyo dhameystirka uumiga hawo soosaarka hawada iyo qalabka kaabaya ee taageeraya adeegyada, wadaagista caaryada, qeybsiga qalabka, iyo wadaagga caadiga ah si macaamiisha adduunka loogu fidiyo adeegyo ODM ah.
Awoodda horumarinta caaryada
Shirkaddayadu waxay ku siin kartaa sawirro 3D ah iyo sawirro qaab-dhismeed qaab-dhismeed muddo 7 maalmood gudahood ah saldhigga tusaalaha ama naqshadeynta naqshadeynta macaamiisha, waxay dhameystiraysaa wax soo saarka caaryada waxayna tijaabineysaa caaryada muddo 45 maalmood ah, waxayna ku bixinaysaa caaryada irbadaha muddo 50 maalmood ah.
Awoodda wax soo saaridda duritaanka
2 nooc oo ah 2,200 tan oo mashiinno wax lagu duro ah ah ah iyo 2 nooc oo ah 1,800 tan oo mashiinno wax lagu duro ah ah, waxaan bixinaa adeeg dhameystiran oo ka imanaya horumarinta wax soo saarka, naqshadeynta, furitaanka caaryada, wax taaj oo kale ee cirbadeynta, iyo shirkii
Awoodda wax soo saarka mashiinka
XIKOO wuxuu leeyahay khadka wax soo saarka otomaatiga ah iyo aqoon isweydaarsiga mashiinka oo dhameystiran, in kabadan 50 shaqaale xirfadlayaal ah, iyo sanadle 50,000 oo mashiinno dhameystiran iyo SKD.
XIKOO wuxuu leeyahay mashiinno badan oo tijaabooyin ah, baaritaanno tayo leh oo lakabyo ah, wuxuu helay 12 shatiyadaha qaranka, wuxuuna dhaafey 3C qaran, shahaadada EU CE, iyo shahaadooyinka Bariga Dhexe ee SASO, tayada wax soo saarkana waa la damaanad qaaday.
Dalbo alaabta ceyriinka ah
Isku soo wada duub wax soo saarka
Ka shaqaynta duritaanka
OEM / ODM macaamiisha iskaashaday